I-OpenPrinting isebenza kwimfoloko yohlelo lokuphrinta lwe-CUPS | Kusuka kuLinux
Iphrojekthi ye-OpenPrinting (kusekelwa yiLinux Foundation), wazise ukuthi onjiniyela bayos baqale ngemfoloko yohlelo lokuphrinta lwe-CUPS, lapho ingxenye esebenzayo kakhulu kwezentuthuko nguMichael R Sweet, umbhali wokuqala we-CUPS.
Kusukela ngo-2007, ngemuva kokutholwa kweMikhiqizo Yesoftware Elula, (inkampani yeCUPS) I-Apple ilawula ngokuphelele ukwakhiwa kwe-CUPS. NgoDisemba 2019, uMichael Sweet, umsunguli wephrojekthi ye-CUPS kanye ne-Easy Software Products, wesula ku-Apple.
Izinguquko eziningi kakhulu kusisekelo sekhodi ye-CUPS zenziwe uqobo nguMichael Sweet, kepha lapho ememezela ukuhamba kwakhe, uMichael ubalule ukuthi onjiniyela ababili bahlala e-Apple abazonikeza isondlo seCUPS.
Nokho, ngemuva kokuxoshwa kukaMichael, iphrojekthi yeCUPS yayeka ukuthuthuka Futhi kungukuthi phakathi ne-2020, ukuzibophezela kuphela okungezwe kwisisekelo sekhodi ye-CUPS ngokuqedwa kobuthakathaka.
Inhlangano enemfoloko i-OpenPrinting yadalwa ngo-2006 ukuhlanganiswa kwephrojekthi yeLinuxprinting.org neqembu elisebenzayo le-OpenPrinting leFree Software Group, ebelithuthukisa ukwakhiwa kohlelo lokuphrinta lweLinux (UMichael Sweet wayengomunye wabaholi baleli qembu).
Ngemuva konyaka, iphrojekthi yaba ngaphansi kwephiko leLinux Foundation selokhu iphrojekthi isebenza ekwakhiweni kwezakhiwo ezintsha zokuphrinta, ubuchwepheshe, ingqalasizinda yokuphrinta namazinga we-interface wezinhlelo zokusebenza zeLinux nezindlela ze-UNIX.
Ngaphezu kokusebenzisana ne-IEEE-ISTO Printer Working Group (PWG) kumaphrojekthi we-IPP, isebenza ne-SANE ukwenza ukuskena kwe-IPP kube ngokoqobo.
Igcina izihlungi zezinkomishi evumela i-CUPS ukuthi isetshenziswe kunoma yiluphi uhlelo olususelwa ku-Unix (hhayi ama-macOS), kanyes obhekele imininingwane ye-Foomatic kanye usebenza kuphrojekthi ye-Common Print Dialog Backends.
Ngo-2012, iphrojekthi I-OpenPrinting, ngokusho kuka-Apple, inakekele iphakethe lokuhlunga izinkomishi ngezakhi ezidingekayo ze-CUPS ukusebenza kumasistimu ngaphandle kwama-macOS (njengokukhishwa kwe-CUPS 1.6, I-Apple iyekile ukusekela ezinye izihlungi zokuphrinta nezipikili ezisetshenzisiwe ku-Linux, kepha hhayi ngentshisekelo kuma-macOS, futhi banciphise nabashayeli be-PPD bexhasa umthetho olandelwayo we-IPP yonke indawo).
Njengamanje, indawo yokugcina imfoloko iqukethe ama-patches aqoqwe ukusatshalaliswa okuhlukahlukene kwe-Linux nezinhlelo ze-BSD.
Igatsha lizovumelaniswa, lokho kusho indawo yokugcina enkulu ye-Apple CUPS izosebenza njengesisekelo, nezinguqulo ze-OpenPrinting CUPS izokwakhiwa njengamakhompiyuthaIsibonelo, ngokususelwa enguqulweni 2.3.3, kuhlelwe ukwakha inguqulo 2.3.3OP1.
Ngemuva kokuhlolwa okubanzi, ushintsho olwenziwe kwimfoloko luhlelelwe ukuthi lubuyiselwe kukhodi ye-CUPS enkulu, ngokuthumela izicelo zokudonsa ku-Apple.
UTill Kampeter, umholi wephrojekthi ye-OpenPrinting, uphawule ngokuvalwa kokushicilelwa kwe-CUPS, wathi uma i-Apple iyeka ukubamba iqhaza kule phrojekthi, yona, kanye noMichael Sweet, bazothatha intuthuko ezandleni zabo, njengoba i-CUPS ibalulekile ku-ecosystem ye-Linux . Ngaphezu kwalokho, ukhulume ngenhloso yokusheshe aqede ukwesekwa kwe-CUPS ngefomethi yencazelo yephrinta ye-PPD, eyehlisiwe.
I-CUPS isazodingeka ku-Linux. Imigqa yemisebenzi ye-CUPS (akuzona zonke izinhlelo zokusebenza zephrinta noma amaphrinta we-IPP omdabu), ihlunga kuqala i-PDF kusuka kuzinhlelo zokusebenza zomsebenzisi ngefomethi eqondwa yiphrinta (noma uhlelo lwephrinta) (i-IPP ayidingi ukuthi iphrinta / iseva i-IPP iqonde i-PDF) bese yabelana ngamaphrinta ngenethiwekhi, futhi nezinhlelo zokufakazela ubuqiniso ezifana neKerberos.
I-CUPS izoyeka ukuxhasa amafayela we-PPD kungekudala (lokhu kungenye yezinguquko ezinkulu zemephu yomgwaqo) ngakho-ke abashayeli bakudala abaqukethe ama-PPD nezihlungi abasasekelwa futhi izinhlelo zokusebenza zeprinta ziyindlela kuphela yokunikezela ngephrinta yabashayeli.
Bheka i-Linux Plumber Microconferences, imihlangano ye-OpenPrinting Summit / PWG (bona iwebhusayithi ye-OpenPrinting, "News and Events"), kanye nezindaba zami zanyanga zonke ze-OpenPrinting.
Okokugcina uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngakho mayelana nephrojekthi, ungabheka imininingwane ngokuya ku- kusixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-OpenPrinting isebenza kwimfoloko yohlelo lokuphrinta lwe-CUPS
I-Tor Browser 10: Uhlobo olusha olukhishwe ngokuthuthuka okuthakazelisayo